Bhonasi Terms uye Conditions |
bhonasi Terms & Conditions
£ 5 Free Registration bhonasi Terms uye Conditions
Kukwidziridzwa ichi inowanika chete wandaifanira itsva nhoroondo yokuisira vakwegura 18 kana kupfuura.
The bhonasi tichaverengerwa icho nhoroondo itsva pamusoro vabudirire ongororo yacho kero ye email yakapiwa. No deposits vanosungirwa.
Zvinogona kutora 10 maminitsi kuti bhonasi kuti kuchanzi.
Chete bhonasi imwe playing mutengi.
Bhonasi chinoshanda 28 Mazuva pashure chikwereti. After nguva ino, inouya kuchanyarara kuva rinoshanda uye mari yasara vachabviswa nhoroondo yako.
chipo ichi Inowanika 2nd January 2015 kusvikira ndaziviswa.
bhonasi ichi anotakura 100x wagering chinodiwa. The £ 5 zvinofanira wagered kanenge 100 nguva asati kurega inogona kuitwa. Saka unofanira wager they 100 X £ 5 = £ 500 usati anogona kutitorera bhonasi yako.
Maximum winnings kubva bhonasi ichi chichange dzavhara panguva £ 20. Izvi zvinoreva kuti chete vaifanira pakati £ 20 zvichawedzerwa yako withdrawable wakatsiga. Chero pachiyero asara kwazvo kuti chitsama pamusoro akabudirira wagering zvichabviswa voided.
bhonasi Izvi zvinogona chete kushandiswa atambire chero yedu mitambo slots.
Minimum kurega ndiko £ 10. Vatambi vanofanira kunyoresa chikonzero mubhadharo kadhi, nechinangwa withdrawals.
Management Matura kodzero mugowana upi bhonasi kana vatengi vanowanikwa kuti tampering pamwe kana zvisina kufanira chero chinhu chine chokuita kusimudzirwa ichi.
Welcome Deposit bhonasi - dhipozita dies bhonasi Terms uye Conditions
The Welcome Deposit kupa inowanikwa chete wandaifanira itsva nhoroondo yokuisira vakwegura 18 kana pamusoro kuita ravo rokutanga 3 deposits nesu.
Zvinotevera dhipozita machisi dziripo:
1there dhipozita – 200% mari mutambo kusvika £ 50 bhonasi.
2wana dhipozita – 100% mari-mutambo bhonasi kusvikira £ 200 bhonasi
3Rd dhipozita – 50% mari-mutambo bhonasi kusvikira £ 250 vari bhonasi
Kuti vave vanokwanisa vonogara Welcome bhonasi, vatambi vanofanira kuisapo / uchatamisa kushoma pakati £ 10 nomumwe wevatatu dhipozita machisi.
Bhonasi mari kutakura wagering chinodiwa 40x kuMudzidzisi kukosha kwokutanga okubhengi uye bhonasi mari unozvipiwa.
Kamwe zvikanzi bhonasi yenyu inoramba yemu- 28 mazuva. Unofanira kupedza wagering zvinodiwa iyi, mari yasara vachabviswa nhoroondo yako.
Chete bhonasi mumwe anogona kuva kushingaira panguva. Kana iwe une aivapo Active bhonasi pachiyero kare, bhonasi ichi zvichawedzerwa pachimirirwa wako bhonasi tungamidzana. Please kuenda “Nhoroondo wangu” chikamu kuona bhonasi yose tungamidzana yako.
Apo mutengi anokumbira kurega kana kuchinjwa kubva kwavo uchitamba mutambo wacho nhoroondo, asati zvakafanira wagering zvinodiwa kuitwa akasangana, vacharasikirwa bhonasi zvose uye winnings kwakakonzerwa nhoroondo. Chete Verengai yepakutanga mubhangi kana pakuenzanisa yepakutanga okubhengi asara ichava withdrawable.
Where chero rokuti kugoverwa kana kukwidziridzwa rwaputswa kana paine uchapupu munhevedzano vachibhejera zvinhu wakaiswa nokuda mutengi kana boka vatengi, izvo zvakafanira munhu dhipozita bhonasi, kunosimudzirwa zvemba, vakasununguka vachibhejera zvinhu kana zvimwe promotional kupa kunoguma avimbiswa mutengi mari pasinei zvaizoguma, kana mumwe kana sechikamu seboka, Management Matura kodzero mugowana bhonasi chedziviriro vachibhejera zvinhu zvakadaro. Isu mberi kuchengetera kodzero kukumbira chero mutengi kugovera zvinyorwa yakakwana kwatiri kuti kugutsikana edu Mhedziso kungwara kuti mutengi ndiani asati kwatiri achirumbidza chero bhonasi, vakasununguka bheji kana kupa kuchikwama kwavo.
inopa All yakadaro dzaizopiwa kuzvivaraidza vatambi uye Management anogona zvayo yega akangwara kutirambidza kukodzera pakati vatengi chokuitawo ose kana chikamu chipi kukwidziridzwa.
All inopa vatengi havabvumirwi mumwe pamunhu, mhuri, kero mhuri, chikero chetsamba yemumhepo, nhamba dzerunhare, chete mubhadharo Nhoroondo nhamba (e.g. debit kana kadhi, etc.), uye vakagoverana kombiyuta, e.g. raibhurari kana kubasa. Isu kuchengetera kodzero dzinodzora Kuwanikwa chero chipo kana inopa zvose chero mutengi kana boka vatengi chero nguva uye dzimwe yedu bedzi uye Mhedziso nekuzvidzora. Anoda chete kushanda vatengi vanenge wakaita / chaiyo mari mubhangi chaiyo pamwe playing yedu
Management Matura kodzero kukanzura, vanodimbura kana kushandura chero makwikwi kana kukwidziridzwa (kana mitemo yayo) chero nguva uye pasina risati ziviso
Management Matura kodzero kushandisa mazita okutanga, kwokutanga wokupedzisira zita, nicknames uye / kana nyika kana town kugara chero promotional zviziviso, vanowana chero promotional bhonasi uye mune mamwe yokutengesa zvinhu, kana pamusoro Service kana kumwewo.
Unogona vasarudze-kubva kugamuchira kushambadza uye kuyeuka promotional kukurukurirana neZvapupu mutengi rutsigiro.
vashandi, vakuru uye vatungamiriri Nektan Ltd, ayo masangano promotional kana zvimwe, licensees uye licensors, basa vanopa uye zvimwe nemakambani kuyeuka kana uchipinda haanganyadziswi kodzera kuti kukwidziridzwa. Chete mashoko anofanira zvinoshanda mhuri vakadaro yakananga.
Kunyange zvazvo vatambi zvinogona paakavapa akawanda bonuses, chete chete bhonasi rinoshanda nekuda kwenyu chero nguva. The bhonasi nengaidzo akaratidza nengaidzo yezviri bhonasi chete. The yose bhonasi wemagazini kunogona kuonekwa yako “Nhoroondo wangu” chidimbu.